४७ बर्षिय म्यादी प्रहरी लिलादेवी भन्छिन ‘श्रीमानको आत्मालाई शान्ति दिलाएँ’ | Sabaiko Online
Home Feature News ४७ बर्षिय म्यादी प्रहरी लिलादेवी भन्छिन ‘श्रीमानको आत्मालाई शान्ति दिलाएँ’
४७ बर्षिय म्यादी प्रहरी लिलादेवी भन्छिन ‘श्रीमानको आत्मालाई शान्ति दिलाएँ’
पर्वत : पर्वतको कुश्मा नगरपालिका वडा नं. ८ चुवा घर भएकी ४७ बर्षिय लिलादेवी के.सी. लाई जीवनमा एउटै धोको थियो आप्mना श्रीमानले छोडेर गएको जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्ने ? र त्यो जिम्मेवारी थियो प्रहरी बनेर देशलाई थोरै न थोरै योगदान दिने । जब प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका लागि उनी म्यादी प्रहरी बनेर शुक्रबार बिदाई भईन उनका आंखाभरी आँशु छचल्कीए र रुँदै प्रमाणपत्र बुझेर म्यादी प्रहरीबाट बिदा भईन । देशको लागि सेवा गर्दागर्दै तत्कालिन शसस्त्र युद्धका क्रममा उनका श्रीमानको मृत्यू भएपछि उनलाई लाग्यो आप्mनो श्रीमानले लिएको देश सेवाको अठोट काम पूरा भएको छैन । त्यसैले उनलाई लागेको थियो छोराछोरीलाई भएपनि प्रहरीमा भर्ती गराएर श्रीमानको आत्मालाई शान्ति दिलाउनै पर्छ । बिदाई क्रममा प्रमाणपत्र बुझेर मञ्चको छेवैमा बसेर टोलाईरहेकी उनले बल्ल बल्ल बोली फुटाउँदै भनिन, “आज मलाई आनन्द आएको छ । प्रहरीमा काम गरेको भनेर प्रमाण पत्र बुभ्mदा मन धान्नै सकिन । मेरो श्रीमान भैदिएको भए कस्तो हुन्थ्यो ? आज फेरि यो प्रमाणपत्रले उहांकै याद आयो ।”